Wariyaasha magaalada Muqdisho iyo Ururada Warbaahinta oo sameyay banaanbax | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wariyaasha magaalada Muqdisho iyo Ururada Warbaahinta oo sameyay banaanbax
Wariyaasha magaalada Muqdisho iyo Ururada Warbaahinta oo sameyay banaanbax
Qaar ka mid ah Wariyaasha magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya iyo Ururada Warbaahinta ayaa sameyay banaanbax ay kaga soo horjeedaan xariga wariye Cabdullaahi Kulmiye Caddow oo maalintii shanaad xabsi ugu jira dowladda Soomaaliya.
Wariyaasha banaanbaxa sameynayay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dalbaday inuu tixgaliyo codsiga wariyaasha Soomaaliyeed ee ku aadan siideynta wariye Cabdullaahi Kulmiye Caddow.
Ururada u dooda wariyaasha ayaa sheegeen iney sameyeen dadaalo badan oo la xariira sii deynta wariyaha inkastoo aysan wali u suura galin.
Wariye Cabdullaahi Kulmiye Caddow ayaa ciidanka Nabad Sugida Soomaaliya u xireen wareysi uu ka qaaday ganacsade Abuukar Cumar Cadaan kaaso wareysiga ku sheegay inuu taageersan yahay fikirka Al-shabaab.
Ugu dambeyntii wariyaasha iyo ururuda u doodaba waxay madaxweynaha Soomaaliya iyo Raysal wasaaraha Xukuumada Soomaaliya ka dalbadeen iney tixgaliyaan xoriyada hadalka iyo Saxaafada.
Wariyaasha magaalada Muqdisho iyo Ururada Warbaahinta oo sameyay banaanbax was last modified: October 21st, 2020 by Admin
Khadija Cengiz oo Dacwad culus ka gudbiyay Maxamed Bin Salman
Shirka wadatashiga mashruuca ka soo kabashada xasaradaha Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho (Sawirro)
Akhriso:- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Jabutiya Ismaaciil Cumar Geelle oo wadahadalo labo geesood ah ku yeeshay Villa Soomaaliya.
18 ruux oo ku dhintay dhisme ku soo dumay Hindiya
Madaxweyne Waare iyo Qoorqoor oo ku wajahan Baydhabo iyo shir ka furmaya
Shabaab oo qoysas danyar ah ka barakiciyay Deegaanka Berdaale
Dowladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay bixisay shatiga lacagaha la’isugu diro taleefoonada Gacanta